Itoobiya oo sheegtay in Mareykanka uu ku haayo faragalin qaawan - Wardeeq 24 TV Itoobiya oo sheegtay in Mareykanka uu ku haayo faragalin qaawan Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Itoobiya oo sheegtay in Mareykanka uu ku haayo faragalin qaawan
Itoobiya oo sheegtay in Mareykanka uu ku haayo faragalin qaawan
Itoobiya ayaa sheegay iney dib u qiimeyn ku sameyneyso xiriirka ay la leedahay Mareykanka, haddii ay sii wadaan iney fara galinta kusii hayaan arrimaha gudaha dalkooda, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda.
Waxey ka jawaabeysay wasaaradda go’aan sheegaya in uu kusoo rogey cuna qabteyn dhaqaale iyo mid socdaal Mareykanka, oo dhinacyo taabanaya, taasoo ka dhalatey dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega.
Sidoo kale, wasaaraddu waxey sheegtay in go’aanka uu kamid yahay cuna qabateyn dhanka socdaalka, oo ay saameyn doontosaraakiil aan la magacaabin.
Itoobiya ayaa sheegtay in arrimahan ay kala hadli doonto dowlado kale, oo uu ku jiro Mareykanka, si loo hagaajiyo waxna loogga badalo duruufaha haatan, gaar ahaan in gargaarka bani’aadanimo uu gaari karo gobolka Tigreega ee ay dagaaladu aafeeyeen.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa lagu sheegay in dowladdu ay wada hadal la fureyso ururka TPLF ee Tigreega, kaasoo xukumayey gobolka waqooyiga.
Previous articleWHO oo soo saartay baaq ku aadan cudurka Karoonaha
Next articleBambo Gacmeed lagu weeraray Saldhig ku yaalla Jowhar